Zvinoitwa kana pakaitika maperembudzi (1-46)
Maperembudzi pazvipfeko (47-59)
13 Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi naAroni achiti: 2 “Kana munhu aine pakazvimba paganda rake,* kana mhezi kana kuti pane chidzvanga, chichiita sechirwere chemaperembudzi*+ paganda rake, anofanira kuunzwa kumupristi Aroni kana kuti kune mumwe wevanakomana vake, vapristi.+ 3 Mupristi achaongorora chirwere chiri paganda rake. Kana mvere dzepaganda pacho dzava chena uye chirwere chacho chichiratidza kuti chakadzika muganda, anenge ari maperembudzi. Mupristi achachiongorora, uye achamuti haana kuchena. 4 Asi kana chidzvanga chacho chiri chichena paganda rake uye chichioneka kuti hachina kudzika muganda uye mvere dzacho dzisina kuchinja kuva chena, mupristi achabva aisa munhu wacho kwake ega kwemazuva manomwe.+ 5 Mupristi achazomuongorora pazuva rechinomwe, uye kana akaona kuti chidzvanga chacho hachina kukura uye hachina kupararira neganda, mupristi achamuisa kwake ega kwemamwe mazuva manomwe. 6 “Mupristi anofanira kumuongorora zvakare pazuva rechinomwe, uye kana pasisaoneki, uye pasina kupararira neganda, mupristi achamuti akachena;+ yaingova mhezi. Munhu wacho anofanira kugeza zvipfeko zvake, ova akachena. 7 Asi kana mhezi yacho ikakura iye atobva pamberi pemupristi kuti aonekwe kana akachena, anofanira kubva azviratidza zvakare pamberi pemupristi. 8 Mupristi anofanira kuiongorora, uye kana mhezi yacho yakakura ichipararira neganda, mupristi achabva amuti haana kuchena. Iwo maperembudzi.+ 9 “Kana chirwere chemaperembudzi chikabuda pamunhu, anofanira kubva aunzwa kumupristi, 10 uye mupristi achamuongorora.+ Kana paganda pacho pazvimba uye pachena uye mvere dzachena, pakazvimba pacho paine ronda rakavhurika,+ 11 iwo maperembudzi asingaperi ari paganda rake, uye mupristi achamuti haana kuchena. Haafaniri kumuisa kwake ega+ kuti azomuongorora zvakare, nekuti haana kuchena. 12 Kana maperembudzi akabuda paganda rese, akazara muviri wemunhu wacho wese kubvira kumusoro kusvikira kutsoka, semaonero anenge achiita mupristi, 13 uye mupristi amuongorora akaona kuti maperembudzi azara muviri wese, achabva amuti akachena.* Ese zvawo achinja kuva machena, uye iye akachena. 14 Asi pakangooneka ronda rakavhurika paari, iye achava asina kuchena. 15 Mupristi paanoona ronda racho rakavhurika, achabva amuti haana kuchena.+ Ronda racho harina kuchena. Iwo maperembudzi.+ 16 Asi kana ronda racho rikava jena zvakare, achabva auya kumupristi. 17 Mupristi achamuongorora,+ uye kana ronda racho rachena, mupristi wacho achamuti akachena. Iye akachena. 18 “Kana munhu akabuda mota paganda rake, ropora, 19 asi paya paiva nemota pakaita bundu rakachena kana kuti chidzvanga chitsvuku chakachenuruka, anofanira kubva azviratidza kumupristi. 20 Mupristi achariongorora,+ uye kana richioneka kuti rakadzika muganda uye kuti mvere dziripo dzachena, mupristi achabva amuti haana kuchena. Icho chirwere chemaperembudzi chakabuda nemumota. 21 Asi kana mupristi akariongorora, oona kuti mukati maro hamuna mvere chena, uye kuti harina kudzika muganda uye kuti harichanyatsooneki, mupristi achabva amuisa kwake ega kwemazuva manomwe.+ 22 Uye kana ranyatsopararira neganda, mupristi achabva amuti haana kuchena. Icho chirwere. 23 Asi kana chidzvanga chacho chikaramba chiri panzvimbo imwe chete chisina kupararira, zvinoreva kuti mota racho rangozvimba, uye mupristi achamuti akachena.+ 24 “Kana mumwe munhu aine vanga rakakonzerwa nemoto uye nyama yepavanga pacho ikava dzvanga dzvuku rakachenuruka kana kuti dzvanga jena, 25 mupristi achariongorora. Kana mvere dziri padzvanga racho dzachena uye pachioneka kuti pakadzika muganda, iwo maperembudzi abuda nemuvanga racho, uye mupristi achamuti haana kuchena. Icho chirwere chemaperembudzi. 26 Asi kana mupristi akapaongorora, oona kuti hapana mvere chena pachidzvanga chacho uye kuti hachina kudzika muganda uye kuti hachichanyatsooneki, achabva amuisa kwake ega kwemazuva manomwe.+ 27 Mupristi achamuongorora pazuva rechinomwe uye kana chanyatsopararira neganda, mupristi achamuti haana kuchena. Icho chirwere chemaperembudzi. 28 Asi kana chidzvanga chacho chikaramba chiri panzvimbo imwe chete, chisina kupararira neganda uye chisinganyatsooneki, zvinoreva kuti vanga racho rangozvimba chete, uye mupristi achamuti akachena, nekuti kuzvimba kwevanga racho. 29 “Kana murume kana kuti mukadzi akaita ronda mumusoro kana kuti pachirebvu, 30 mupristi achabva aongorora ronda racho.+ Kana akaona richiita serakadzika uye bvudzi rake rakachenuruka uye riri shoma, mupristi achabva amuti haana kuchena; icho chirwere chemumusoro kana kuti chepandebvu. Iwo maperembudzi emumusoro kana kuti epachirebvu. 31 Asi kana mupristi akaona kuti ronda racho rinoita sekuti harina kudzika uye kuti harina bvudzi dema mukati maro, mupristi anofanira kubva aisa murwere wacho kwake ega kwemazuva manomwe.+ 32 Mupristi achamuongorora pazuva rechinomwe, uye kana ronda racho risina kupararira uye bvudzi racho risina kuchenuruka mukati maro uye ronda racho richiratidza kuti harina kudzika, 33 munhu wacho anofanira kuveurwa, asi pane ronda hapafaniri kuveurwa. Mupristi achabva aisa murwere wacho kwake ega kwemazuva manomwe. 34 “Mupristi achapaongorora zvakare pazuva rechinomwe, uye kana ronda riri mumusoro make uye pachirebvu risina kupararira neganda uye risingaratidzike serakadzika, mupristi anofanira kubva amuti akachena, uye munhu wacho anofanira kugeza zvipfeko zvake, ova akachena. 35 Asi kana ronda racho rikapararira neganda iye ambonzi akachena, 36 mupristi achamuongorora, uye kana zvapararira neganda, mupristi haafaniri kutsvaga kana aine bvudzi rakachenuruka; munhu iyeye haana kuchena. 37 Asi kana aongororwa akaonekwa kuti chironda hachina kupararira uye bvudzi dema rakabuda ipapo, zvinoreva kuti apora. Iye akachena, uye mupristi anofanira kumuti akachena.+ 38 “Kana murume kana kuti mukadzi akaita zvimadzvanga paganda rake* uye zvimadzvanga zvacho zviri zvichena, 39 mupristi achazviongorora.+ Kana zvimadzvanga zvacho zviri zvichena asi zvisingachanyatsooneki, tumapundu twangobuda paganda rake. Munhu iyeye akachena. 40 “Kana murume akapera bvudzi mumusoro ova nemhanza, iye akachena. 41 Kana akapera bvudzi mumusoro make nechepamberi ova nemhanza, iye akachena. 42 Asi kana akatanga kubuda bundu dzvuku rakachenuruka pamhanza yake kana pahuma yake, maperembudzi ari kubuda pamhanza yake kana kuti pahuma yake. 43 Mupristi achamuongorora, uye kana bundu racho riri pamhanza kana pahuma riri dzvuku rakachenuruka, uye richiita kunge maperembudzi ari paganda rake, 44 iye ane maperembudzi. Haana kuchena, uye mupristi anofanira kumuti haana kuchena nemhaka yechirwere chiri mumusoro wake. 45 Kana ari munhu ane maperembudzi, zvipfeko zvake zvinofanira kubvarurwa, musoro wake unofanira kuregwa wakati nyangarara uye anofanira kufukidza ndebvu dzake dzepamusoro pemuromo, oshevedzera kuti, ‘Handina kuchena, handina kuchena!’ 46 Achava asina kuchena mazuva ese aanenge aine chirwere chacho. Sezvo asina kuchena, anofanira kugara kwake ega. Achagara kunze kwemusasa.+ 47 “Kana maperembudzi akaenda pachipfeko, chingava chemvere dzemakwai kana chejira, 48 pangava pashinda dzejira rakarukwa kana dzemvere dzemakwai, kana kuti padehwe kana pazvese zvinogadzirwa nematehwe, 49 uye pakava neruvara rwegirini yakachenuruka kana rutsvuku pachipfeko, padehwe, pashinda dzejira rakarukwa, kana kuti chero pachinhu chakagadzirwa nematehwe, ichocho chirwere chemaperembudzi, uye chinhu chacho chinofanira kuratidzwa mupristi. 50 Mupristi achaongorora chirwere chacho, uye achaisa chinhu chacho chine chirwere kwacho chega kwemazuva manomwe.+ 51 Kana akaongorora chirwere chacho pazuva rechinomwe, oona kuti chirwere chacho chapararira nechipfeko chacho, neshinda dzejira rakarukwa kana kuti nedehwe (pasinei nekuti dehwe racho rinoshandiswei), anenge ari maperembudzi anotapukira, uye hachina kuchena.+ 52 Anofanira kupisa chipfeko chacho kana kuti shinda dzejira rakarukwa, kana kuti chero chinhu chakagadzirwa nedehwe chine chirwere chacho, nekuti iwo maperembudzi anotapukira. Chinhu chacho chinofanira kupiswa nemoto. 53 “Asi kana mupristi akachiongorora, oona kuti chirwere chacho hachina kupararira nechipfeko chacho kana kuti neshinda dzejira rakarukwa kana kuti nechero chinhu chakagadzirwa nedehwe, 54 mupristi acharayira kuti vageze chinhu chacho chine chirwere, uye achachiisa kwacho chega kwemamwe mazuva manomwe. 55 Mupristi achabva achiongorora kana chanyatsogezwa. Kana panga paine ruvara pacho pasina kuchinja, kunyange pasina kupararira, icho hachina kuchena. Munofanira kuchipisa nemoto nekuti chinhu chacho chinenge chadyika nemukati kana kuti nekunze. 56 “Asi kana mupristi akachiongorora, oona kuti paya panga paine ruvara hapachanyatsooneki pashure pekunge chagezwa, achabva apacheka opabvisa pachipfeko chacho kana kuti padehwe kana kuti pashinda dzejira rakarukwa. 57 Asi kana ruvara rwacho rukaoneka pane imwe nzvimbo pachipfeko chacho kana kuti pashinda dzejira rakarukwa kana pachinhu chero chakagadzirwa nedehwe, chirwere chacho chinenge chichipararira, uye unofanira kupisa nemoto chero chinhu chine chirwere chacho.+ 58 Asi kana ruvara rwacho rukabva zvachose pachipfeko chacho kana kuti shinda dzejira rakarukwa kana kuti chero chinhu chakagadzirwa nedehwe chaunenge wageza, chinofanira kugezwa kechipiri, uye chichava chakachena. 59 “Uyu ndiwo mutemo wechirwere chemaperembudzi chinenge chiri pachipfeko chemvere dzemakwai kana kuti chejira, kana kuti pashinda dzejira rakarukwa, kana kuti pachinhu chero chakagadzirwa nedehwe, kuti chinzi chakachena kana kuti hachina kuchena.”
^ ChiHeb., “paganda renyama yake.”
^ Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti maperembudzi rinoreva zvakawanda uye rinogona kusanganisira zvirwere zvakasiyana-siyana zvinotapukira paganda. Rinogonawo kusanganisira umwewo utachiona hungaenda pazvipfeko nepadzimba.
^ Kana kuti “haachatapukiri vamwe.”